May 2013 – democracy for burma
On May 31, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
KACHIN PEACE TALK ENDS :Seven Points Agreement of KIO and Myanmar GOVERNMENT-VIDEOS
On May 30, 2013 May 31, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
The signed agreement paved the way to reach toacomprehensive cease-fire deal between Kachin Independence Army and Burmese Army. General Sumlut Gum Maw, KIA’s deputy chief of staff, said after the meeting that the agreement is notacomplete cease-fire agreement, but it is the one that will lead towardsacease-fire agreement.
The statement also said that two parties agree in principle to establish Joint Monitoring Committees, to continue to discuss on Internally Displaced Persons (IDPs) resettlement, to establishatechnical team based in Myitkyina, and to continue to allow the participation of observers.
The agreement was witnessed and signed by UN General Secretary’s special advisor Vijay Nambiar, Deputy Chief of Mission from Chinese Embasssy Lu Zhi, and representatives of armed ethnic groups KNPP, KNU, CNF, NMSP, RCSS/SSA, SSPP/SSA, UWSA and NDAA.
MYANMAR: KACHIN PEACE TALK 2ND DAY-MRTV VIDEO
On May 29, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Update Unrest LASHIO U Ye Htut 29.may 2013
On May 29, 2013 May 29, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
လားရှိုးမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များမှ တားဆီးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ် နေပါတယ်။
လားရှိုးမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ သတင်းထောက်များအခက်အခဲရှိရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနဲ့ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီများပေးဖို့၊ ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝေလင်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး။ ဖုန်း ၀၉ ၅၃၄၃၉၉၆
ဒေါ်ဆိုင်းလီခမ်း ဦးစီးအရာရှိ။ ဖုန်း ၀၉ ၄၀၃၇၂၅၅၂၅
ဦးထွန်းနေလှိုင်ဦး၊ ဓာတ်ပုံ။ ဖုန်း ၀၉၄၃၁၇၁၃၆၈
Curfew imposed in Lashio following clashes-muslim man burn buddhist wife-video
On May 29, 2013 May 30, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
credit emg 29.may 2013
Fresh clashes occurred in Lashio, Myanmar’s northeastern Shan state, yesterday afteraMuslim man had dousedaBuddhist woman with fuel and set her on fire.
Two Islamic religious buildings and shops were set on fire in the clashes, which prompted authorities to imposeacurfew.
Nay Win is the Indian-Chinese man of Islamic faith while Aye Aye Win is the Chinese-Myanmar woman of Buddhist faith.
The woman tried to run but was caught and doused with the fuel by the man, who was later beaten by angry local people from nearby areas.
As soon as the information spread, police arrived at the scene and arrested Nay Win.
At 5pm, about 150 locals had gathered in front of No (1) Police Station, shouting for the handing over of the arsonist to them.
According to the local reporter of the Daily Eleven, the man and woman did not know each other before, and the man living in Kengtung only arrived in Lashio three days ago. He was staying inahotel, the reporter said.
Aye Aye Win, whose hands, legs and hair were burnt, is receiving treatment at the emergency ward of Lashio People’s Hospital.
An official from Shan State Police Force said: “The incident occurred afterarow between Nay Win and Aye Aye Win at the petrol shop. We found two stimulant tablets from the pocket of the man’s trousers. The father of the victim has openedacase at the police station.”
Five relatives of the victim and about 10 Buddhist monks arrived at the police station at 7pm, shouting for taking the arsonist out of the police station and gradually, the number reached about 30. The suspect was sent to Lashio Prison at 7.30pm, the police officer added.
Lashio Police Station has charged Nay Win with arson attack, attempted murder and drug possession.
Angry residents set fire toamosque near Lashio Myoma market and an Islamic school on Lanmadaw Road around7pm. The fire spread to 15 shops near the school and was nearly extinguished by 11 pm, according to local residents.
The authorities managed to handle the mob outside the police station and all over the city around 8:30 pm and section 144 of the Penal Code has been imposed in Lashio since 9:30 pm last night.
This riot occurred on the same day the Union Peacemaking Committee and the Kachin Independence Organization held their first peace talk in Myanmar.
The majority of the population in Lashio is Chinese while few Muslims live in the city. Critics have called for the authorities to investigate which country and organization are involved in the riot and release the report to the public.
Since Thein Sein’s civilian government took office, the first riot started on June 8 2012 in Rakhine State based on Thida Htwe’s death that occurred on May 28,aday after Indian Prime Minister Dr Manmohan Singh visited Myanmar to discuss bilateral cooperation.
Ten days before Indian Prime Minister’s visit to Myanmar, US Secretary of State Hilary Clinton told Myanmar Minister of Foreign Affairs Wunna Maung Lwin that US President Barack Obama will release an official announcement for the easing of investment sanctions on Myanmar.
After riots occurred in Meikhtila, Mandalay Region on March 20 this year, the riots had spread to other townships in western Bago Region. These riots occurred after the Latpadaungtaung Investigation Commission released its report on March 12 and around the time President Thein Sein went onagoodwill visit to New Zealand and Australia.
ALERT!!- U WIRA THU :MUSLIM MAN BURNED BUDDHIST WIFE IN SHAN STATE-“လားရှိုး အဓိကရုဏ်း”
On May 28, 2013 May 29, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
29 years old Buddhist house wife was burn by Muslim man.
The Muslim man flashed with gasoline on the wife and put fire.
At the moment Buddhist people near by this area are protected to save hear life and woman was sent to hospital in time. So that Buddhists are become angry upon the mosque which is teaching and allowing to kill Muslims’ wifes and trying to destroy the Mosque.This is happening in Shanstate,Myanmar .
update 29 may 2013 U YE HTUT
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်နဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစ၀်အောင်မြတ်တို့ကလည်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ အတူ နှစ်ဘက်တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်တန့်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
*************************ကြူခုံက အမှတ် (၇)၊ နယ်မြေ (၁၇)မှာ တည်ရှိပြီး၊ မူဆလင် (၅)ယောက်ကလည်း အမှတ် (၇)၊ နယ်မြေ (၁၇)ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်များမှာ ၁။ ဇော်ဝမ်း၊ ၂။ ဇော်မင်း၊ ၃။ ထွန်းလွင်ဦး၊ ၄။ ထွန်းနိုင်၊ ၅။ သိန်းထိုက်စိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်မှုကြောင့် မောင်ဆန်းဝင်းမှာ ခေါင်း ဒဏ်ရာ (၉)ချက်ချုပ်ရပြီး ဒေါ်အေးဝင်းနှင့်အတူ ဆေးရုံ တက်ကုသနေပါတယ်။
ကိုနေဝင်းမှာ ကျိုင်းတုံက လာသူဖြစ်ပြီး လားရှိုးမြို့ထဲမှာ ပြဿနာရှာ သောင်းကျန်းနေတာ ၄/၅ ရက်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ ရဲက ခဏဖမ်းထိန်းထားပြီး အချုပ်မှ လွတ်တာ မကြာသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
၁၄၄/ ထုတ်ပြီးနောက် ၁၀း၂၀ နာရီမှာ လူစုကွဲသွားပြီး မီးသတ်ကလည်း မီးငြိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြို့မဗလီနှင့်ကပ်လျက် မြို့မဈေးကို မီးကူးစက်သွားတာ ခုချိန်ထိ မငြိမ်းသေးပါဘူး။
၁၁း၀၀ နာရီခန့်မှာ လေးငါးဆယ် အင်အားရှိတဲ့ လူစုဟာ ပျောက်ကြားအသွင်ဆောင်လာကြပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြလို့ ရပ်ကွက် (၉)မှ ဗလီတစ်ခု မီးလောင်သွားပါတယ်။ စိန်ကြယ်ဒံပေါက်ဆိုင်၊ လာရှိုး ဓါတ်ပုံတိုက်တို့ အဖျက်ဆီးခံရပြီး ဒန်အိုး ဒန်ခွက်ဆိုင်တန်းလည်း အဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
New sectarian violence has flared in northeastern Myanmar, withamob burning some shops after unconfirmed rumors spread thataMuslim man had set fire toaBuddhist woman.
A politician in Lashio in Shan state, Sai Myint Maung, said authorities banned gatherings of more than five people after about 150 gathered outsideapolice station Tuesday demanding the alleged culprit be handed over. He said they also burned some stores.
PHOTO CREDIT U WIRA THU
082-23304 (No 1 Police station)
082-23009 (Police of Shan State)
082-23078 (Police Officer)
09-403768595 (U Komara-Monk)
ညနေ(၆း၀၀)နာရီကျော်မှာ ရဲစခန်းရှေ့ လူစုလူဝေးနဲ့ ကိုနေဝင်းကို ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ကိုနေဝင်းက ကျိုင်းတုံကလာသည့် ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီး၊ တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ တည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ည(၇း၀၀)နာရီကျော်မှာ မြို့မဗလီနှင့် ဟံသာဝတီလမ်းမှ ကုန်မာဆိုင်တစ်ဆိုင်တို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထဲရေးဌာန၊ လားရှိုးတိုင်းမှူးတို့ ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ လုံခြုံရေးချပြီး၊ ထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ သိရပြီး၊ အခြေအနေအားလုံးကို ညတွင်းချင်း တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းနိုင်လောက်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ဒေါ်အေးဝင်း သေဆုံးသည့်သတင်း မမှန်ပါဘူး။ ဆေးကုသဆဲဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ၂၇-၅-၂၀၁၃-ည (၈း၀၀)နာရီမှာ ကျူခုံစောင့် ကောင်လေး မောင်ဆန်းဝင်းကို ကျူခုံမဖွင့်လို့-ဆိုကာ မူဆလင်ငါးယောက်က ရန်လုပ်ကြလို့ ကျူခုံဖွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကျူခုံထဲအရောက်မှာ မူဆလင်ငါးယောက်က ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကြလို့ ဗမာကောင်လေး မောင်ဆန်းဝင်း ဆေးရုံတက်နေရပါတယ်။
မောင်ဆန်းဝင်းဖြစ်ပြီး နောက်နေ့ ဒေါ်အေးဝင်းဖြစ်တာဆိုတော့ ပြဿနာကို တမင်ဖန်တီးနေကြတာလားဆိုတာ တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။
ဗမာတွေ အကြမ်းဖက်တုန့်ပြန်ရင် ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားနိုင်လို့ ဆင်ခြင်ကြဖို့ မြို့သံဃာနှင့် ရပ်ဖိရပ်ဖများက မေတ္တာရပ်ခံနေကြောင်း သိရပါတယ်။
082-23304 (အမှတ်-၁ ရဲစခန်း)
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့
ညနေ (၄)နာရီကျော်ခန့်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား မီးရှို့မှု
ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လားရှိုး မြို့ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှ တာဝန်မှူး ဒုရဲအုပ်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးကို ကျွန်တော်တို့ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းထားပါတယ်။ ဓာတ်ဆီလောင်းပြီးမီးရှို့တာ ဟုတ်ပါ တယ်” ဟု ၎င်းက မြန်မာ့ခေတ်သို့ ပြော
အဆိုပါ အမှတ်(၁)ရဲစခန်းရှေ့တွင် လူ(၂၀၀)ခန့် စုရုံးရောက်
ရှိနေပြီး သံဃာတော် တချို့မှာ ရဲစခန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ညှိ
နှိုင်းနေကြောင်း ၎င်း ရဲစခန်းရှေ့ ရောက်ရှိနေသူတစ်ဦးက
“အဖမ်းခံထားရတဲ့သူကို သူတို့လက်ထဲ အပ်ဖို့ လူ အုပ်ကြီးက အော်ဟစ်တောင်းဆို နေကြတယ်” ဟု၎င်းက ပြောကြားသည်။
ယခုအချိန်၌ လားရှိုးမြို့မဈေးအနီးရှိ ဗလီအပါအဝင် တစ်မြို့
လုံး၌ လုံခြုံရေးအင်အားထူထပ်စွာ ချထားကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ မီးလောင်နေပါတယ် ။
Credit to The Myanma Age
MYANMAR -NO JOKE: YOU BETTER PAY WHEN YOU PASS THE GATE-VIDEO
On May 28, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ချင်းတွင်းတံတား၊ မုံရွာ မှာ ဂိတ်ကြေးမပေးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ရိုင်းစိုင်းစွာခုလို အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်သည့်အထိ မိုက်ရိုင်၏။
U WIRA THU 28.MAY-“ဦးဝီရသူ ဆွီဒင် SVT-သတင်းဌာနမှ လာရောက် အင်တာဗျူး”
“ဦးဝီရသူ ဆွီဒင် SVT-သတင်းဌာနမှ လာရောက် အင်တာဗျူး”
ဦးဝီရသူထံသို့ ယနေ့ ၂၈-၅-၂၀၁၃- မနက်(၈း၃၀)နာရီတွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ SVT- (Swedish Television)မှ Mr.Lars Moberg- လာရောက် အင်တာဗျူးခြင်း ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်မှာ မိတ္ထီလာလို အဓိကရုဏ်းများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေ ရှိ/မရှိ မေးမြန်းရာတွင်-
“အစိုးရကလည်း သတိ ဝီရိယ ကြီးမားလာပြီ။ ပြည်သူတွေကလည်း ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ထိရောက်စွာ တုန့်ပြန်ရကောင်းမှန်း သိလာကြပြီ။ မွတ်ဆလင်တွေကလည်း မိတ္ထီလာပြည်သူတွေလို တုန့်ပြန်နိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်သွားပြီ ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော်နည်းပါတယ်။”
မိတ္ထီလာ အဓိကရုဏ်းပေါ် သဘောထားအမြင်ကို မေးမြန်းရာတွင်-
“အကြမ်းဖက်မှုကို အားမပေးဘူးဗျ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို အကြမ်းဖက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝ မလိုလားဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ မောင်တောလို ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဘဲ အသာလွတ်ကြီး ဂျီဟတ်လုပ်တာ ထက်စာရင် ဘုန်းကြီးအသက်ခံရလို့ ဒေါသပေါက်ကွဲတာ ဖြစ်တော့ ဖြေသာသေးတာပေါ့ဗျာ။”ဟု ဦးဝီရသူက ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။”
KACHIN PEACE TALK STARTS -VIDEOS
On May 27, 2013 May 28, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
CREDIT 27.MAY 2013 EMG
Tens of thousands of local Kachin people warmly welcomed the peace delegation of Kachin Independence Organization (KIO) arriving Myitkyina, the capital of Kachin State in Myanmar today to resume peace talk with the government peace delegation.
UN’s special envoy to Burma, Vijay Nambiar, attended peace talks on Tuesday between the Burmese government and Kachin rebels in Myitkyina, the capital of Kachin State, the first time the UN high official has participated in such negotiations.
The peace talk will be resumed tomorrow at Ma Jwel Hall of Manaw Sports Ground in the city.
The government delegation led by Vice-chairman Aung Min of Union Peacemaking Committee went to Nan Sanyan village, 60 miles away from Myitkyina to welcome the Kachin delegation there.
Hswan Lut Gan leads the Kachin delegation which also includes Deputy Commander-in-Chief Major General Gwan Maw of the Kachin Independence Army (KIA) asamember.
It is the first time the top-ranking officials from KIO arrived in Myitkyina in two years since the armed conflicts has started between them in June 2011.
For that, local people from several villages and many refugees from IDP camps in Kachin welcomed the Kachin delegation waving KIO flags along the road they came. Continue reading “KACHIN PEACE TALK STARTS -VIDEOS” →